DHEGEYSO: Soomaalida oo ka hor timid hilibka xalaasha ah oo laga joojiyay iskuullada degmo Sweden ku taalla! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Soomaalida oo ka hor timid hilibka xalaasha ah oo laga joojiyay...
DHEGEYSO: Soomaalida oo ka hor timid hilibka xalaasha ah oo laga joojiyay iskuullada degmo Sweden ku taalla!
(Stockholm) 18 Sebt 2019 – Maamulka degmada Järfälla ee magaalada Stockholm ayaa sheegay in dookhyada hilibka loo qalo qaabka xalaashaha ah aan gebi ahaanba laga heli doonin dookhyada cunto ee dhamaanba iskuullada ku yaalla degmadaasi.
Wuxuu maamulku tillaabadan u cuskaday iyadoo aaney qandaraaska ka soo qayb gelin kawaanleeyda hilbaha u qala si xalaal ah, isla markaana buuxin karta xeerarka dhowrista xuquuqda xoolaha, sida ay sheegtay Kerstin Svensson oo ah madaxa laanta qandaraasyada ee degmada Järfälla oo u warrantay Idaacadda Sweden laanta af-Soomaaliga.
– Dadka qandaraaska soo dalbaday ma buuxin karaan shuruudaha hilibka xalaasha ah, sidoo kale kawaannada hilibka xalaasha ah qala ee buuxiya shuruudaha xuquuqda xayawaanku wax qandaraas dalab ah nooma soo gudbin, ayay tiri Kerstin.
Si kastaba waxaa degmadan ku dhaqan dad badan oo Muslimiin ah oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin, waxaana tillaabadan ka fal celinaya Soomaali badan oo ay ku jiraan waalidiin ay carruuri u dhigato iskuullada degmada.
Cabdi Maxamuud Cabdalla, Safiya Maxamuud iyo Nuura Aadan oo ka mid ah bulshada degmada ku dhaqan ayaan wax ka waydiiyay sida ay u arkaan inaan iminka hilib xalaal ah laga bixin doonin iskuullada degmada Järfälla.
– In ay carruurta qaarna helaan hilib qaarna la yiraahdo khudaar ku ekaada socon mayso, ayay tiri Nuura Aadan.
Previous articleKenya oo bilowday inay qabqabato Soomaalida (Tirada haatan u xiran oo aan helnay)
Next articleDF Somalia oo loo gacan geliyay xogta qaraxii loo gaystey diyaaradda DAALO (Maxaa la ogyahay?)
(Ohio) 29 Sebt 2020 - Sahra Abuukar oo ah gabar reer Somalia ah oo ku dhaqan Maraykanka ayaa ku guuleysatey tartanka sanadlaha ah ee...